ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသော သံဃာတော်များအား သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသနိုင်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် Announcement of Burmese Muslim Youths to help treatment in Australia for the burnt Buddhist Monks | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The United Nations humanitarian coordinator Ashok Nigam, ‘Fundamentally, everybody hasaright to citizenship’
ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသော သံဃာတော်များအား သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသနိုင်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် »
Tags: Australia, Aye Aye, Bhikkhu, Burma, Monk, Myanmar, Thein Sein, Yangon
This entry was posted on December 14, 2012 at 6:47 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသော သံဃာတော်များအား သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသနိုင်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် Announcement of Burmese Muslim Youths to help treatment in Australia for the burnt Buddhist Monks”
than zin oo Says:
December 15, 2012 at 12:51 pm | Reply